Hazo poak’aty fotsiny | NewsMada
Nafotaka tato ho ato ny fambolena zana-kazo. Ny minisitry ny Tontolo iainana sy ny ala aza nanao hetsika niavaka mihitsy. Zana-kazo andramena no natsatony niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy. Toa fomba nentina nanakonana ihany ny fanisana ny bolabola etsy sy eroa izay ela vao vita na teo aza ny fanampian’ny Banky iraisam-pirenena, ara-bola, hanaovana ny asa. Ny fanontaniana mipetraka, firy isan-jaton’ireo zana-kazo no ho vanona ka hitombo ho hazo lehibe?
Ny zava-misy tsy lavina mantsy, lasa fitsangantsanganana sy fakan-drivotra ho an’ireo mpiasa birao leo ny asa andavanandro izy ity. Tsy misy loatra ny fanomanana ara-tekinika ny lavaka fa avy dia raikitra ny raharaha. Natao ho raharaham-pirenena ny fambolen-kazo efa tamin’ny andron’ny Pisodia. Raha nahomby tokoa izany, azo inoana fa efa lasa Nosy maitso toy ny taloha i Gasikara.
Tsy izany no nitranga fa doro tanety niredareda sy nahazo vahana. Ny tavy niroborobo, ny fanaovana saribao tsy naharaka ny filana raha vao milatsaka ny orana. Ny fiarovana ny tontolo iainana nefa tsy maintsy mifanaraka amin’ny tetikady mahomby momba ny angovo. Any ampita, tsy azo hihodivirana ny fiaraha-mitantana amin’ny antoko Maitso. Ohatra ny any Alemaina, izy ireo no mandidy manapaka. Ny fiara raha vao mandoto rivotra dia tsy mahazo mandeha na vao nivoaka vao haingana aza.
Ny eto amintsika, kamiao efa tany amin’ny taona efapolo, mbola mitatitra fasika sy biriky. Maty tampoka eo ankodimirana ka mikatso ny fifamoivoizana. Tsy laitra ny sekotra avoakany. Azo inoana ve fa ho sarotiny amin’ny fikajiana ny tontolo manodidina tokoa ny mpitondra? Tsy resaka atao eo imolotra fotsiny io, na lamaody any ivelany ka arahina, fa fomba fiainana. Toe-tsaina efa voavolavola manaiky fa ilaina izany, mba tsy handova tanihay ny taranaka ho avy. Ny Malagasy repotry ny fitadiavana ny harapaka anio ihany, ka vitsy ny mahatsiaro tena fa misy loza mitatao eto noho ny fahapotehan’ny ala, tapa-porohana sisa tsy may. Fihotsahan’ny nofon-tany, fiakaran’ny maripana, orambe tsy nampoizina. Ho an’ny Taningazana e!